China YF-T7 Makeup Vanity TableLarge Mirror & Cabinet & DrawerTribigs Vanity Etemeete Isiokwu Manufacturer na Supplier | Yifan
YF-T7 Makeup Efu Isiokwu Nnukwu enyo & Cabinet & Drawer
Styledị ụdị ejiji pụrụ iche, jiri ihe efu bịa, enyo nwere ike idozi, oche mkpuchi na onye nhazi ihe etinyere n'efu. Ihe efu bu ihe drawer abuo sara mbara nke puru idota ihe efu gi di nkpa na ihe ịchọ mma. Enwere ike iji okpokoro ihe efu na oche oche gị n'ime ime ụlọ ịwụ, ime ụlọ ịwụ, ime ụlọ ma ọ bụ paseeji.
Atụmatụ Nchekwa, Drawers, Ikanam mirror
IHE: High gloss MDF, Gold plating igwe anaghị agba nchara
Isiokwu oge 800mmL x 400mmW x810mmH
Emere ya site na osisi eji eme ya na ihe eji achapu ocha di ocha, oche a zuru oke na-egosiputa ihe eji acho acho.
Ọmarịcha ngwongwo kristal dị mma ma baa uru
na-agbanwe agbanwe ihie enyo (ọcha dị ọcha, odo na ọkụ ọkụ): Naanị metụ enyo ahụ ka ọ gbanwee 3 dị iche iche nchapụta maka mkpa gị
4 nchekwa nchekwa na 2 nnukwu drawer na-enye ohere nchekwa zuru oke maka etemeete gị, ntutu ntutu isi, obere ọkpọ ọkụ, ọla. Tebụl gị ga-adịwanye mma ma hazie nke ọma. Nhazi nke ebe dị elu nwere ike dabara eriri eriri nke ahụ mmadụ ka ị ghara ịmepụta ibu na-enweghị isi mgbe ị na-etinye ihe ịchọ mma. Ugboro abụọ kabinet imewe nwere nnukwu ohere nchekwa, nwere ike ịchekwa gị kwa ụbọchị obere ihe.
Bulie ọdịdị nke ime ụlọ ime ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ịsa ahụ gị site na itinye mpempe akwụkwọ nkọwa zuru ezu. Ogwe igwe ahụ na elu ọcha, na-eme ka ime ụlọ gị dịkwuo mfe ma dịkwa okomoko. Otu agbakwunye elekere anya nwere ọkụ nwere agba atọ nwere njiri mara mma maka etu esi arụ ọrụ na anya.
Tọ a gụnyere urukurubụba upholstered oche maka ahaziri, ọkaibe anya.
NT DKWU NDIM ： 800mmL x 400mmW x 750mmH
800mmL x 400mmW x810mmH
YLỌ: Okomoko & Ọmarịcha Ọdịdị na ọgbara ọhụrụ, ọdịdị ọcha dị oke ọnụ na ọmarịcha ewu ewu ọgbara ọhụrụ, homedị ​​ụlọ mgbe ochie na-enwu n'akụkụ nke ọzọ nke ndụ gị
IHE: White + Gold obibi Igwe anaghị agba nchara ụkwụ Akụrụngwa: E1 ọkwa urughuru osisi + ntụ ntụ ntekwasa metal eku
Mfe ịgbakọta, ngwaọrụ na ntuziaka gụnyere.
Nke gara aga: YF-T6 nkecha na nke ọgbara ọhụrụ mgbakwasa
Osote: YF-T8 akụkụ jupụtara okomoko mgbakwasa okpokoro
Ochie Dressing Isiokwu
Uwe Mgbakwunye Onye Nhazi
Uwe eji ejiji na igwe eji agba nchara
Piaono Agba Dressing Isiokwu
White Uwe mgbakwasa
Oak ụkwụ Makeup Isiokwu
YF-T3 jupụtara n'oge a uche mgbakwasa
Okpokoro Oge Akara na Enyo na 5 Drawers
Mfe na mara mma imewe tebụl etemeete
YF-T13 High gloss Mirror N'ihu Top ebuli Efu Set
YF-T17 zuru oke maka obere oghere Oghere efu